Muvhuro, March 25, 2013 Muvhuro, March 25, 2013 Douglas Karr
Tinonzwa zvakanaka kuti tinoona tekinoroji maitiro achiuya uye ndokuzivisa iwe pamberi penguva Isu tanga tichitaura nezvekukura kwenhare kwenguva inopfuura gore izvozvi, asi takashamisika patakangoita ongororo ye optimization yemutengi achangoburwa uye vanga vasina zano renhare… hapana. Saiti yavo yanga isiri nhare, maemail avo haana kugadzirirwa nhare, uye hapana nharembozha padhuze… nada. Dzimwe nguva zvinotora vhidhiyo
Chitatu, November 7, 2012 Chitatu, November 7, 2012 Douglas Karr
Erik adzoka aine yake yazvino (4th) chikamu chevhidhiyo yake infographic pasocial media. Kana iwe ukanyatsoteerera, yega vhezheni yevhidhiyo inoita basa rinoshamisa pakuratidza shanduko iyo iyi nyowani midhiya yakatsvaira nyika nayo. Kunyangwe iwo maparaini anonakidza. Enzanisa neyegore rapfuura Social Media Revolution vhidhiyo uye iwe unowana yakawanda yakawanda manhamba ane hukama neicho chaicho, kudyidzana kwemari pakati pezvigadzirwa nevatengi. Erik Qualman ndeye
China, May 24, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Isu takatumira akateedzana enhau enhau enhau kubva paErik Qualman's Socialnomics. Ivo vanonzwisisa uye vazere nenhamba dzinokatyamadza dzekuti masocial media ari kuchinja sei mararamiro atinoita, mashandiro uye kutaurirana. Iyi parody inosetsa kwazvo kusagovana, zvakadaro. Vanhu vanoti kana ukabata chokwadi… ndipo pazvinozoita zvinhu zvinosetsa. Ndinofunga vhidhiyo iyi ndizvo chaizvo! Yemagariro Midhiya Revolution - Iyo Parody
Pano ndinogara mukamuri yehotera muMilwaukee, Wisconsin. Chikwata chedu chiri kuendesa kune kambani kumusoro kuno mangwana uye kudzokera kuIndipolis. Ndakatenga sutu nyowani yerwendo - yanga iri kutengeswa kweinenge 70% kubviswa uye ini handina kukwanisa kuipfuudza. Iyo chokoreti brown - ingangoita nhema - uye yakasununguka. Handina kutenga sutu mumakore akati wandei saka ndakazvibata kune rese